Lix dacwadood oo uu Trump wajihi karro | Hangool News
Lix dacwadood oo uu Trump wajihi karro
November 16, 2020 - Written by Hangool News 1
Inta uu yahay madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump wuxuu ku raaxeysanayay xasaanadda gaarka ah ee ka difaaceysay nooc walba oo dacwad ah, ha ahaato mid dambi ama mid shacab intaba.
Hadda, maadaama looga guuleystay doorashada madaxtinnimada ee 2020-ka, Mr Trump wuxuu mar dhow noqon doonaa muwaadin caadi ah.
Taasi micnaheeda waa inuu waayay xasaanaddii madaxweynenimada, wuxuuna bannaanka ugu soo dhacayaa qareennada iyo dacwad oogeyaasha.
“Islamarkii uu xafiiska kasoo baxo, xaaladdu way isbaddali doontaa,” ayuu yidhi Daniel R Alonso, oo ah dacwad ooge horay uga soo shaqeeyay federaalka Mareykanka iyo gobolka New York, oo la hadlayay BBC-da.
“Ma sii lahaan doono awoodda madaxweynenimada ee looga cabsado, loogana xishoodo in baaritaanno lagu sameeyo.”
Baaritaan dambi oo ku sugaya New York ayaa ah kan ugu weyn ee uu ka walwal qabo Mr Trump, halisna ku ah shirkaddiisa guryaha kala iibisa.
Intaas waxaa usii dheer dacwado kale oo isugu jira musuqmaasuq ay ku eedeeyeen xubno ka mid ah qoyskiisa iyo kuwo kale oo ku saabsan tacaddiyo dhinaca galmada ah.
Dacwadaha sugaya waxaa lagu tilmaamay daad. Halkan ayaana ku soo bandhigeynaa ilaa lix dacwadood oo uu wajihi karo.
1) Eedeymaha ku saabsan inuu lacago u bixiyay si ceebtiisa loo qariyo
Waxa aan ka ognahay: Karen McDougal, oo ah maalqabeen kharashka ku bixisa baashaalka, atariishada filimada anshax darrada ee lagu magacaabo Stormy Daniels iyo sheegashooyin ku saabsan sheekooyin loo abuuray in wax la qariyo.
Kuwaas ayaa saldhig u ah waxa loogu yeeray fadeexadda lacagaha lagu bixiyay in ceebta la ariyo. Labada dumarka ahba waxay sheegeen inay xidhiidh galmo la lahaayeen Mr Trump ayna lacago uga heleen si ay sirtaas u qariyaan, xilligii loo socday doorashadii madaxweynaha ee sanadkii 2016-kii ka dhacday Mareykanka.
Markii ay hadleen sanadkii 2018-kii, waxay culeys siyaasadeed ku soo kordhiyeen maamulka Mr Trump, iyagoo toosh ku ifiyay labo dambi oo baaritaanno lagu sameynayo.
Trump oo markii u horraysay u muuqda mid qiray guusha Biden
Qoraalka sawirka,Stormy Daniels, oo magaceeda dhabta ah uu yahay Stephanie Clifford, waxay sheegtay inay Mr Trump gogol la wadaagtay sanadkii 2006
Dambiga hore wuxuu ku saabsan yahay sharci jabin dhinaca federaalka ah, ama qaranka, sharciyada iyo doorka Michael Cohen, oo ahaa qareenkii gaarka ahaa ee Mr Trump iyo “ninka arrimaha isku duway”.
Cohen oo baadhitaan lagu sameynayay wuxuu qirtay inuu qorsheeyay lacago dumarkaas la siiyay. Lacagahaas la bixiyay waxaa ka abuurmay dacwad la xiriirta in laga bixiyay dhaqaalihii ololaha doorashada, taasoo sharci darro ah, waxaana Cohen sanadkii 2018-kii lagu riday xukun saddex sano oo xabsi ah.
Qoraalka sawirka,Michael Cohen
Cohen wuxuu sheegay in Mr Trump uu “ku amray” isaga inuu lacagahaas bixiyo, haddana wali wax dacwad ah laguma soo oogin madaxweynaha. Maxay tahay sababtu?
Ugu horreyn, si dacwad loogu soo oogo ama loo maxkamadeeyo Mr Trump, waxay dacwad oogeyaashu u baahan yihiin inay caddeyn buuxda u helaan eedeynta ku saabsan inuu Cohen ku amray bixinta lacagahaas.
Tan labaad, xitaa haddii ay dacwad oogeyaashu heyn lahaayeen caddeyn ku filan, dastuurka dowladda Mareykanka ma oggola in dambiyo heer federaal ah loo maxkamadeeyo madaxweyne wali xilka haya, sida ay sheegeen khubarada dhinaca sharciga.
Kiiskaas ma la xiray? Maya, lama xirin. Halkan ayey sheekadu iska baddaleysaa.
Qoraalka sawirka,Karen McDougal waxay raalli galin siisay Melania Trump, iyadoo ka raalli galineysa xiriirka ay la yeelatay seygeeda
Laakiin, baaritaan labaad oo ku saabsan lacagahaas la bixiyay ayaa wali ka socda New York.
Waxaan ka war qabnaa in xeer ilaaliyaha degmada Manhattan, Cyrus Vance, uu qiimeynayo in shirkadda Trump ay waxyaabo been abuur ah u sameysay si ay u muujiso inay lacago bixisay.
Waxa aannaan ogeyn waa in Mr Vance uu wax caddeyn ah u hayo diiwaangalinta dacwad maxkamadeed. Arrintaasna way ku xiran tahay howsha.
Waxa laga yaabo inay dhacaan: In laga been sheego howlaha ganacsiga waa dambi iska yar markii la eego sharciga u yaalla gobolka New York. Dambiga noocaas ahna wuxuu sababi karaa xabsi ilaa hal sano ah.
Haddaba, waa tan qeybta adkeyneysa howsha Mr Vance.
Waqti labo sano ah ayaa loo oggol yahay in New York laga diiwaan galiyo dacwad la xiriirta dambi sidaas u yar.
“Sidaas darteed, maadaama lacagahaas la bixiyay waqti ka horreeya labo sano, waxay u muuqataa in [dacwad oogeyaashu] aysan nasiib lahayn,” ayuu yidhi Mr Alonso.
Intaas ka dib, waxaa jirta suurtagalnimo kale.
Qoraalka sawirka,Cyrus Vance wuxuu tan iyo sanadkii 2018-kii hoggaaminayay baaritaan lagu sameynayay shirkadda Trump
Sida uu qabo sharciga New York, dambiyada la xiriira ka been sheegidda ganacsiga waxay noqon karaan kuwo waaweyn haddii sababtii loo sameeyay ay ahayd in lagu qariyo dambiyo kale, sida musuqmaasuq dhinaca canshuurta ah.
Dambiyada astaantaas leh waxay heli karaan waqti dheeraad ah, waxayna leeyihiin ciqaad adag.
Wali qaabka dacwadahaas loo soo oogi karo ma cadda. Lama oga in dastuurka u yaalla New York uu oggol yahay in Trump loo maxkamadeyn karo ku xad-gudubka dhaqaalaha loogu talagalay ololaha – kaasoo sharciga federaalka uu xabsi ugu xukumay Cohen.
Halkaas ayey mar kale ka adkaaneysaa howsha Mr Vance ee baadhitaanka ah.
2) Baadhitaanka ku saabsan musuqmaasuqa cashuurta iyo bangiga
Waxa aan ka ognahay: Arrintan waa “weerar siyaasadeed”, ayuu yidhi qareen u shaqeeya shirkadda Trump oo ka hadlayay kulan su’aalo lagu weydiinayay oo qeyb ka ah baadhitaanka Mr Vance uu sameynayay bishii August ee sanadkii 2019-kii.
Hadalka uu jeediyay qareenkaas wuxuu u muuqday mid cadho laga dareemayo.
Mr Vance wuxuu xilligaas codsanayay oo kaliya in loo soo gudbiyo dukumiintiyo. Wuxuu dalbanayay in la tuso warqadihii maaliyadda shirkadda ee dhowr sano la sameeyay. Waxaa ka mid ah xogta ku saabsan canshuur celintii uu Mr Trump sameeyay muddo siddeed sano ah.
Tan iyo xilligaas, Mr Trump wuxuu diidayay inuu xogtaas gudbiyo, isagoo sheegayay inay arrintaas tahay xad-gudub loo geysanayo sharaftiisa siyaasadeed.
Bishii October, maxkamad racfaan ayaa kasoo horjeedsatay sheegashada Trump, waxayna taasi horseedday in xogta ku saabsan canshuur celintiisa ay usoo dhawaato faraha dacwad oogeyaasha.
Run ahaantii, Mr Vance ayaa maxkamadaha ku qanciyay saameynta ay leedahay in la arko macluumaadka ku saabsan canshuur celinta Mr Trump.
Waxa laga yaabo inay dhacaan: Mr Trump waxaa laga filayaa inuu dalabka ku aaddan canshuur celintiisa racfaan uga qaato maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka. Halkaas ayey arrintu ku xallismi kartaa.
Mr Trump ayey rajadiisu fiican tahay.
“Baadhitaannada dambi ee ugu saameynta badan waa kuwa soo bandhigaya macluumaadka canshuur celinta Trump iyo kuwa bangiga,” ayuu BBC-da ku yidhi barfasoor Jonathan Turley, oo macallin ka ah kulliyadda sharciga ee Jaamacadda George Washington. “Laakiin lama oga caddeymaha lagu heli doono inta ay gaadhsiisan yihiin,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Haddii Mr Vance ay u suuragasho inuu bannaanka soo dhigo xogta canshuur celinta Trump, waxaa laga yaabaa in kiis dambi uu soo baxo iyo in uusan soo bixin labadaba.
Dhinaca ay arrintu u dhacdaba, Mr Vance wuxuu macluumaadka canshuurta u rabaa si uu usii wado baadhitaankiisa.
3) Baadhitaanka ku saabsan musqumaasuqa ganacsiga guryaha
Waxa aan ka ognahay: Xeer Ilaaliyaha Guud ee New York Letitia James ayaa ah qof kale oo laf dhuun gashay ku ah Mr Trump.
Tan iyo bishii March ee sanadkii 2019-kii, Ms James waxay hoggaamineysay baaritaan ku saabsan kiis rayid ah oo lagu sameynayay eedeymo la xiriira in shirkadda Trump ay sameysay musuqmaasuq dhinaca ganacsiga guryaha ah.
Mar kale kiiskan xididdadiisa waxay dib ugu noqonayaan Cohen, oo beishii February ee sanadkii 2019-kii u sheegay Aqalka Wakiillada in Mr Trump uu si khiyaano ah u weyneysiiyay qiimaha hantidiisa si uu u helo deymo kaddibna uu si khiyaano ah qiimaheeda saxda ah uga hoos mariyay si looga yareeyo canshuurta.
Qoraalka sawirka,Michael Cohen, oo arrimaha u fududeyn jiray Mr Trump, waxaa Golaha Wakiillada looga yeedhay bishii February 2019
Markhaati kaca uu Cohen bixiyay wuxuu Ms James y furay waddo kale oo ay ku raadiso macluumaad dheeri ah oo la xidhiidha hantida Mr Trump.
Sida Mr Vance oo kale, Ms James waxay gashay dagaal maxkamadeed si ay xogtaas u hesho.
Eric Trump, oo ah ku xigeenka madaxa shirkadda Trump, ahna madaxweynaha wiilkiisa, ayaa haweeneydaas ku eedeeyay inay “waddo cadaadis dhinaca siyaasadda ah”.
Iyadoo ay arrintaas jirto, haddana wuxuu fuliyay codsi ay uga dalbatay inuu xafiiskeeda tago bishii October, si uu su’aalaheeda uga jawaabo.
Waxa laga yaabo inay dhacaan: Ms James waxay u baahan tahay marqaati kac dheeraad ah iyo xog kale oo ay kusii ambaqaaddo baadhitaankeeda.
Mr Trump intii uu xilka hayay wuxuu sheegay in uusan waqti u heynin kiisaska ku furan. Hadda, marmarsiiyadaas ma heli karo.
Ms James waxay Mr Trump ku heli kartaa fursad ay xafiiskeeda ku geysto, kuna dhaariso ka hor inta aysan su’aalo weydiinta ku billaabin, isla sidii ay ku sameysay wiilkiisa.
Qoraalka sawirka,Letitia James waxay su’aalo weydiisay Mr Trump wiilkiisa, Eric
“Inta badan maxkamadaha way u garaabaan madaxweyneyaasha marka ay mashquul sheegtaan. Laakiin sidaas uma sameeyaan muwaadiniinta caadiga ah,” ayuu yidhi Mr Alonso.
Baadhitaannada noocan oo kale ah ee ku saabsan dambiyada rayidka waxay horseedi karaan ciqaabo dhinaca maaliyadda ah, haddii la helo caddeymo ku filan dambiga.
Haddii ay sidaas dhacdana, waxaa billaabanaya baadhitaan ku saabsan dambiyo kale.
4) Kiisaska ku saabsan hab maamulka
Waxa aan ka ognahay: Kiisaskan waxay la xiriiraan eedeymo ku saabsan in lacago laga faa’iiday shaqaaleysiinta dadka ama maamulista xafiis loogu adeegayo shacabka.
Haddaba arrintan maxaa ka khuseeya Mr Trump?
Waxaa lagu eedeeyay inuu sharciga “shaqaaleysiinta” jabiyay intii uu madaxweynaha ahaa. Sharciyadan waxay ku xusan yihiin dastuurka dalka Mareykanka.
Qoraalka sawirka,Mr Trump uu Mr Trump ku leeyahay Washington wuxuu mar walba bartilmaameed u ahaa mudaharaadeyaal intii uu xilka madaxweynaha hayay
Mid ka mid ah qodobbada sharcigaas wuxuu dhigayaa in dhammaan shaqaalaha dowladda federaalka, oo uu ka mid yahay madaxweynaha, ay fasax ka qaataan Aqalka Wakiillada ka hor inta aysan aqbalin faa’iido kasta oo kasoo galeysa dalal ajnabi ah.
Saddex kiis oo kala duwan ayaa laga diiwaan galiyay Mr Trump, kuwaasoo lagu sheegayo in fasaxaas uusan raadinin.
Mid ka mid ah kiisaskaas wuxuu qeexayaa suurtagalnimada in xad gudub noocaas ah uu ku dheehan yahay marti galinta saraakiil ajaanib ah loogu sameeyay Hoteelka uu Trump ku leeyahay magaalada Washington DC.
Mr Trump wuu ku ganac seyray saameynta sharcigan, wuxuuna sheegay in madaxweyneyaal kale ay horay lacag noocaas ah u sameeyeen.
Waxa laga yaabo inay dhacaan: Si kastoo ay ahaataba, dacwadaha ku saabsan xad-gudbka hab maamulka xafiiska waxaa laga yaabaa in la laalo ama dadkii diiwaan galiyay ay iska dhaafaan, sida ay aaminsan yihiin khubarada dhinaca sharciga.
Mid ka mid ah oo ay soo gudbiyeen siyaasiyiin Aqalka Wakiillada u matala Xisbiga Dimuqraaddiga waxaa horay u laashay amxkamadda ugu sarreysa.
“Sharciyada noocan ah uma badna inay usii gudbaan tallaabo ku saabsan dambi,” ayuu yidhi Mr Turley, oo khabiir ku ah shuruucda ku xusan dastuurka.
“Dhhaam kiisaskan waxay salka ku hayaan Trump xilliga uu xafiiska madaxweynaha hayay, mar haddii uu xilka ka dagana way wada daciifayaan,” ayuu yidhi.
5) Kiisaskaku saabsan xad-gudubka galmo
Waxa aan ka ognahay: Mr Trump waxaa lagu eedeeyay inuu tacaddiyo galmo u geystay haween faro badan, kuwaasoo qaarkood eedeymahooda ay soo socdeen tobannaan sano.
Mr Trump wuu beeniyay dhammaan eedeymahaas, wuxuuna ku tilmaamay “war been abuur ah”, iyo sheekooyin la siyaasadeeyay.
Inta badan dadka eedeymahaas jeediyay waxay soo baxeen xilligii la galayay doorashadii 2016-kii.
Mr Trump wuxuu wacad ku maray inuu dhammaantood dacwado kusoo oogi doono, laakiin ilaa hadda wax tallaabo ah uma uusan qaadin.
Taas baddalkeeda, dadkii eedeynayay qaarkood ayaa isaga dacwado ka gudbiyay. Labo dumar ah ayaa kiisas meel ka dhac ah ka gudbiyay Mr Trump iyagoo ka cadheysan inuu ku tilmaamay beenaaleyaal.
Qoraalka sawirka,E Jean Carroll waxay Mr Trump ku eedeysay inuu kufsaday 1990-meeyadii
E Jean Carroll, oo muddo dheer wax ku qori jirtay majalladda Elle magazine, ayaa ka mid ah haweenkaas.
Waxay Mr Trump ku eedeysay inuu ku kufsaday qol lagu labisto oo ku yaalla hoteelka Manhattan, 1990-meeyadii.
Mr Trump wuu beeniyay arrintaas, wuxuuna dagaal kula jiraa kiiska meel ka dhaca ah ee laga diiwaan galiyay.
Waxa laga yaabo inay dhacaan: Kiiskaas hadda wuu sii socon karaa, waxayna qareennada Ms Carroll fursad u heystaan inay caddeymo isku duwaan.
Tusaale ahaan, waxay cadaadis ku saari karaan maxkamada in dhacaanka DNA ee Mr Trump laga baadho dhar ay Ms Carroll sheegtay inay xirneyd xilliga uu “kufsanayay”.
Kiis kaas la mid ah, balse ka duwan, oo meel ka dhac ah waxaa gudbisay Summer Zervos, oo horay tartan ugu gashay barnaamijka Mr Trump ee telefishinka. Isla sidaas oo kale ayuu kiiskaasna usii socon karaa.
Qoraalka sawirka,Summer Zervos (left) was one of several women to accuse Mr Trump of sexual misconduct ahead of the 2016 election
Ms Zervos waxay sheegtay in uu tacaddi galmo u geystay xilli uu la galay kulan ay uga wada hadlayeen fursadda shaqo, sanadkii 2007-dii.
Laakiin Mr Trump wuu beeniyay sheegashadaas. Wuxuu ku eedeeyay inay dacwad been abuur ah ka sameysaneyso.
Hase ahaatee Ms Zervos waxay ka gudbisay dacwad meel ka dhac ah sanadkii 2017-kii, iyadoo dooneysa in la siiyo lacag magdhow ah oo gaadheysa ugu yaraan $3,000 oo doolar.
6) Kiiska ay gudbisay Mary Trump
Waxa aan ka ognahay: “Musuqmaasuqa kuma uusan koobneyn ganacsiga qoyska – wuxuu ahaa hab nololeed,” qoraalkaas wuxuu ku jiraa kiiska dacwadeed ee ay Mary Trumpka gudbisay adeerkeed Donald.
Waxay Mr Trump ku sheegtay qof halis galiya ruux walba oo muwaadiniinta Mareykanka ka mid ah. Buug ay ka qortay ayey kusoo bandhigtay arrimo badan oo ay uga hadleysay inuu yahay “qof qallafsan”.
Qoraalka sawirka,Mary Trump waxay buuggeeda ku xustay in adeerkeed uu yahay qofka ugu halista badan caalamka
Waxay haweeneydan ku eedeysay Mr Trump iyo qaar kale oo ka mid ah walaalihiis inay ka khiyaaneen dhaxal ay xaq u lahayd ayna ku cadaadiyeen inay ka tanaasusho hantida ay ku lahayd ganacsiga qoyska.
Ms Trump waxay dhaxal u lahayd hanti qiimo leh oo ka mid ah ganacsiga qoyska, markii uu dhintay Fred Trump Jr – oo ahaa aabbeheed, sidoo kalena ahaa Trump walaalkiis ka weyn – oo dhintay sanadkii 1981-kii xilli uu 41 jir ahaa. Ms Trump waxay markaas ahayd 16 jir.
Dacwadda ay gudbisay waxay ku dalbaneysaa lacag dhan ugu yaraan $500,000 oo doolar.
Waxa laga yaabo inay dhacaan: Aqalka Cad wuxuu sheegay in buugga Ms Trump ay ka buuxdo been badan, laakiin Mr Trump wali kama uusan bixinin wax jawaab ah.
Haddii la codsado xog ku saabsan arrimahaas iyo marqaatifur, Mr Trump ma heli doono xasaanaddii madaxweynenimo ee uu ku hor istaagi jiray arrimahaas.
Ma jiro muwaadin Mareykan ah, xitaa madaxweynaha, oo sharciga ka sarreeya.